Kusarudzwa kwaVa Dube seMutungamiri weZIFA Koitisa Mutauro
WASHINGTON — Kusarudzwa semutungamiri zvakare weZIFA kwakaitwa VaCuthbert Dube neMugovera, kwasiya vanhu vakawanda vakashama mirimo yavo, vamwe vachiti pakaitwa chioko muhomwe kuti VaDube vadzoserwe pachinzvimbo ichi.
Vateereri veStudio7 vakawanda vataura pachirongwa cheLiveTalk neMuvhuro vanoti VaDube, semunhu ari kubva mukupomerwa mhosva yekuita zvehuori kuPremier Service Medical Aids Society, PSMAS, havaifanirwa kunge vakakwikwidza musarudzo yekuva mukuru weZIFA.
VaDube, avo vakaendeswa pamudyandigere zvechimbi chimbi kuPSMAS uko vaive Chief Executive Officer, vanonzi vaitambiriswa mari dzinodarika zviuru mazana mashanu emadhora pamwedzi. Mari idzi dzinonzi dzaisanganisira mari yemuhoro, mari dzekubatsirikana nezvimwe zvakadaro.
VaDube, vakadzingwa zvakare kubhodhi reZimbabwe Broadacsting Corporation, uko vaive sachigaro vachipa vashandi vepamusoro kuZBC mari dzinotyisa.
Asi vachangosarudzwa semutevedzeri wemutungamiri weZIFA, VaOmega Sibanda, vanoti sarudzo dzakaitwa neMugovera dzakaitwa zviri pachena uye dzakatambirwa nesangano reFIFA.
VaSibanda vanoti vane zvirongwa zvakawanda zvekuyedza kugadzirisa mamiro enhabvu munyika.
VaSibanda vanoti sangano ravo riri kutarisira kusimbaradza nhabvu sezvo vave nebhodhi idzva iro rinokwanisa kufambisa zvinhu nemazvo.
VaDube vakakunda sachigaro weHarare City, Va Leslie Gwindi, nhengo yebhodhi reZIFA, Va Nigel Munyati, pamwe naVa Trevor David Carelse-Juul, avo vakambotungamirawo ZIFA kare.
Nhengo dzebhodhi idzva dzakasarudzwa neMugovera, ndiVaTawengwa Hara, VaBernard Gwarada, VaJohn Phiri pamwe na Fungai Chihuri.
Mumwe muongorori wenhau dzenhabvu, VaMuziwethu Hadebe, vanoti kunyange vamwe veruzhinji vasiri kufara nemafambisirwo akaitwa sarudzo, zviri pachena kuti hapana chingasandurwe sezvo sarudzo dzakaitwa pachena uye dzichikokerwa nesangano re nhabvu repamusoro re FIFA.
Va Sibanda vanoti kugadzwa kwebhodhi idzva kunobatsira kuzounza pfungwa dzitsva pamusoro pemafambisirwo enhabvu munyika. VaSibanda vanoti sangano ravo richagara pasi rozeya kuti roshandisa nzira dzipi dzekusimudzira nhabvu munyika.
ZIFA inonzi ine zvikwereti zvakawandisa izvo zviri kuita kuti itadze kufambisa zvaknaka nyaya dzenhabvu munyika.
Hurukuro NaVa Muziwethu Hadebe